Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New Mexico
Te hahafantatra ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana rongony any New Mexico ve ianao? Tamin'ny alàlan'ny House Bill 2, nolaniana tamin'ny 12 aprily 2021, dia neken'ny New Mexico ho ara-dalàna ny marijuana ampiasan'ny olon-dehibe, ahafahan'ny olona manana 21 taona na mihoatra. Nanomboka teo, ny Diviziona fanaraha-maso rongony dia tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny programa rongony ampiasain'ny olon-dehibe.
Miaraka amina karazana fahazoan-dàlana 10 misy, ary hoops sasany hitsangatsangana, i New Mexico --amin'ny fanjakana hafa- dia mitaky fitandremana manokana ny fitsipika mba hijanonana hatrany amin'ny fandaharan-drongony rongony ampiasain'ny olon-dehibe. Na izany aza, ny vinavina ara-toekarena dia naneho fa ny varotra rongony fialam-boly any New Mexico dia mety hahatratra hatrany amin'ny $ 318 tapitrisa amin'ny taona voalohany fotsiny.
Ka na dia mitaky fiheverana manokana amin'ny antsipiriany aza ny fizotran'ny fahazoan-dàlana, dia mety ny valiny.
Inona avy ireo karazana fahazoan-dàlana rongony any New Mexico?
Araka ny voalazan'ny House Bill 2, misy karazany 10 ny fahazoan-dàlana rongony hampiasa olon-dehibe any New Mexico:
Fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe
Fahazoan-dàlana anaovan'ny olon-dehibe fampiasana
Fahazoan-dàlan'ny mpivarotra ambongadiny
Fananganana rongony mifangaro volo
Microbusiness mpamokatra rongony
Microbusiness rongony mifangaro
Courses ho an'ny rongony fampiasana olon-dehibe
Faritra fihinana rongony
Laboratoara fikarohana rongony
Laboratoara fitiliana rongony fampiasana olon-dehibe
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS MARIJUANA AMIN'NY MASSACHUSETTS
Fandoavana lisansa ho an'ny orinasa rongony any New Mexico
Ireto avy no sarany momba ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana rongony any New Mexico:
Fahazoan-dàlana ho an'ny olon-dehibe: $ 2,500 / taona - $ 1,000 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Fahazoan-dàlana anaovan'ny olon-dehibe fampiasana: $ 2,500 / taona - $ 1,000 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Fahazoan-dàlan'ny mpivarotra ambongadiny: $ 2,500 / taona - $ 1,000 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Fananganana rongony mifangaro volo: 7,500 1,000 $ / taona - $ 125,000 / taona isaky ny trano nahazoan-dàlana. Tsy afaka mihoatra ny $ XNUMX izy io
Microbusiness mpamokatra rongony: Mahatratra $ 1,000 / taona
Microbusiness rongony mifangaro: Hatramin'ny $ 2,5000 / taona - $ 500 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Courses ho an'ny rongony fampiasana olon-dehibe: $ 1,500 / taona - $ 1,000 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Faritra fihinana rongony: $ 2,500 / taona
Laboratoara fikarohana rongony: $ 2,500 / taona - $ 1,000 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Laboratoara fitiliana rongony fampiasana olon-dehibe: 2,500 / taona - $ 1,000 / taona isaky ny trano manana fahazoan-dàlana fanampiny
Tokony ho ao an-tsainao fa ireto no vidiny ihany ny sarany ofisialy mba hampiharana sy hitazonana fahazoan-dàlana any amin'ny fanjakana. Na izany aza, tsy maintsy jerenao ny trano sy ny fandaniam-bola isan'andro / asa mba hamaritana hoe ohatrinona ny vola ilainao handanianao ny fandidiana.
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana rongony any New Mexico?
Raha te hijery ireo fepetra manokana napetraky ny House Bill 2 ianao, dia azonao atao ny mijery ny “Ahoana ny fomba fangatahana fahazoan-dàlana hampiasa rongony vaovao any New Mexico”Lahatsoratra. Araka ny voalaza teo dia mbola tsy mivoaka ny fepetra takiana ilaina mba hangataka fahazoan-dàlana, ary ny lalàna mifehy ny fahazoan-dàlana farany dia manomboka amin'ny 1 Janoary 2022, ary ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy avoaka alohan'ny 1 aprily.
Na izany aza, ny mazava dia hoe, raha te-hahazo fahazoan-dàlana rongony any New Mexico, dia tsy maintsy mandefa fangatahana izay mila manomana drafitra fandraharahana rongony.
Ity drafitra fandraharahana ity dia tokony hampiditra ireto zavatra manaraka ireto:
Fepetra takiana manokana any Mexico
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zavatra azonao atao ianao mba hananana fanajana ny indostrian'ny rongony any New Mexico, aza misalasala Mifandraisa aminay.
Tags:Fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New Mexico, Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any New Mexico